kirada baaqatay - Tenants Victoria
Inta badan heshiisyada kireystaha kirada horay ayaa loo bixiyaa. Nidaamka ugu caansani waa in kirada horey loo bixiyo isku maalin bil kasta si bisha hore loogu daboolo.
Haddii aadan bixin kirada maalinta ay ku beegan tahay, maalin kasta oo aad ku jirto hantida adigoon lacagta kirada bixin waxaad noqon doontaa mid hal maalin ku baaqatay ama “kirada baaqashooyin”.
siyaabaha looga hortagi karo gelitaanka kirada ku baaqashooyin
Haddii aad ku jirto dakhliga hoose ama mid hawlgabka ama dheefta, way kuu sahlanaan kartaa inaad bixiso kirada wakhtigeeda haddii aad iska bixiso labadii todobaadba mar markastoo aad hesho dakhligaaga. Si kastaba ha ahaatee, kireysi badan heshiisyadu waxay u baahan yihiin in kirada bil kasta la bixiyo . Haddii aad rabto inaad bixiso kirada labadii toddobaadba halkii bishiiba, waa inaad isku daydaa inaad ka heshid ogolaansho mulkiilaha guriga ama wakiilka hantida ma guurtada ah.
Haddii adiga hesho lacagta hawlgabka ama lacag dheef ah kirada waxaa laga jari karaa iyadoo si toos ah loo bixiyo iyadoo la adeegsanayo Centrepay, oo ay maamusho Centrelink. Wixii dheeraad macluumaad ah kuna saabsan Centrepay waa inaad la xiriirtaa Centrelink.
Haddii aad ka bixiso kirada dhanka Centrepay markaas adiga ayey kugu xiran tahay inaad joojiso lacagta markaad guurto. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso inaad adigu bedesho qadarka kirada ee la bixiyey haddii aad ka guureysid ka hor inta aanay bislaanin.
Nuqulada kirada waa inay ku jirto xilliga kirada la bixiyey. Tani waa inay kuu sheegtaa taariikhda kiro bixintu ku beegantay. Waa inaad weydiisataa nuqulka kiro bixinta markastoo aad bixiso kiro. Haddii aadan hubin marka kiro ay ku beegantay waa inaad la xiriirtaa milkiilaha guriga ama wakiilka hantida ma uurtada ah oo weydiiso nuqul ka mid ah diiwaankaaga bixinta kirada (inta badan loo yaqaan lejarka kirada).
waxa la sameeyo haddii adigu gasho kiro baaqashooyin
Haddii aad dib uga dhacdo 14 maalmood oo lagugu leeyahay, mulkiilaha guriga ayaa ku siin kara ogeysiis 14-maalmood ah si aad uga baxdo. 14 ka maalmood ee daahidda waxay noqon kartaa maalmo isku xiga, ama 14 maalmood ayaa si tartiib tartiib ah loogu kordhiyaa haddii aad bixiso kiro dhiman muddo dhowr toddobaad ama bilood. si kastoo ay isugu darsameen dib u dhacyadu, waa inaad heysato 14 cisho oo buuxa o aad ku dambeyso kiradaada ka hor inta aanu mulkiilaha guriga ku siin Amar ka Bixid.
Adiga waxaa lagu siin karaa oo keliya ogeysiin ka Bixid ah ee kirada oo ah mid kugu daahday. Lama siin karo Ogeysiis inaad ka baxdo adigoo si hormaris ah u bixin waayey kirada. Haddii aadan ku jirin xaalad 14 maalmood oo dib uga dhac ah kirada wakhtiga aad hesho Ogeysiin ka bixid ah markaa ogeysiisku waa mid aan ansax ahayn.
Haddii aad gasho dib uga dhac kirada adigoo aan awoodin inaad bixiso lacag, la xiriir mulkiilaha guriga ama wakiilka guryaha sida ugu dhaqsaha badan adigoo ii soo sheegaya marka aad bixin doonto.
Haddii aadan ku bixin karin lacagta lagugu leeyahay bixinta, waa inaad soo jeedisaa inaad lacagta ku wada bixiso in muddo ah (tusaale ahaan $ 20 oo dheeraad ah toddobaadkii). Ha soo jeedin inaad bixiso wax ka badan intii aad awoodi kartid. Ka dhig soojeedinta mid qoraal ah oo nuqul ka xafido-xataa haddii mulkiilaha ama wakiilka guryaha aanu aqbalin soo jeedintaada, adigu waxaad u isticmaali kartaa warqaddaada caddeyn ahaan inaad isku dayday inaad xallisho dhibaatada.
Waa sharci darro in mulkiilaha guriga ama wakiilka guryaha isku dayo inuu si shakhsi ahaana inuu kaa saaro. Keliya waxaa ku saari kara booliska iyadoo xitaa, waa inay heystaan wax sax ah oo Heysasho Amar iyo Waaaran Heysasho kana socota dhanka Maxkamadda Madaniga iyo Maamulka Fiktooriya ( VCAT ).
Haddii aad u baahan tahay caawimo inaad sameyso qorshe lacag bixin ah waxaad la hadli kartaa la-taliye lacageed adiga oo wacaya Khadka Telefoonka Deynta Qaranka halkan 1800 007 007.
Waxaa sidoo kale jira adeegyo guriyeyn oo laga yaabo inay ku siiyaan kaalmo dhaqaale haddii aad ku jirto xaalad dib uga dhac kiro. Waxaad ka heli kartaa adeegyadan halkan 1800 825 955 (24 saac oo bilaash ah).
hanaanka ka saaridda dib uga dhaca kirada
Waxa lagaa saari karaa oo keliya haddii lagu siiyey mid sax ah oo Ogeysiin ka Saarid ah, ay jirtay dhageysi ee Maxkamadda Madaniga iyo Maamulka Fiktooriya (VCAT), Maxkamadda oo siisay mulkiilaha Heysasho Amar, Mulkiilaha oo gatay Waaran Heysasho iyo Booliiska oo u yimi inay fuliyaan waaranka.
Haddii mulkiilaha ama wakiilku diido soo jeedintaada bixinta ama aadan awoodin inaad bixiso wax lacag ah, mulkiiluhu waa inuu raaco nidaam sharci oo habboon haddii ay rabaan inay ku saaraan adiga.
Haddii aad ka hesho Ogeysiin Dhegaysi xagga VCAT, adiguna aanad rabin in lagu saaro, adigu waa inaad ka soo qeyb gashaa Dhegeysiga VCAT.
Haddii mulkiilaha ama wakiilku uu kuu sheego inaadan u baahnayn inaad tagto dhageysiga sababtoo ah waxaad wada bixisay kiradii kugu baqatay (ama sabab kastoo kale), waa inaad kala xiriirtaa VCAT 1300 01 8228 (1300 01 VCAT) si loo hubiyo in Codsiga laga noqday. Haddii aan laga noqonin waa inaad tagtaa dhageysiga.
Meesha dhageysiga, Xubinta VCAT ayaa sameyn karta Lahaansho Amar ama waxay waxay go’aansan karaan inay laalaan ama dib u dhigaan codsiga mulkiilaha ee Lahaanshaha Amarka. Xubinta ayaa laga yaabaa inay dib u dhigto codsiga haddii:
waxaad tusi kartaa in qorshe dib u bixin ah lagu heshiiyey; ama
waxaad tusi kartaa Maxkamadda sida aad u wada bixin karto lacagta lagugu leeyahay; iyo
mulkiiluhu in aanay ku dhici doonin wax khasaare lacageed ah oo ay sababto
Qaar badan kireystayaal ahi waxay ku guulaystaan inay weydiiyaan VCAT inaysan ugu deeqin Lahaansho Amar haddii ay leeyihiin qorshe macquul ah oo dib loogu bixiyo dib u dhaca kiro bixinta.
Waa inaad qaadataa caddaynta ugu badan ee aad awooddo xagga Dhegeysiga VCAT si aad u muujiso sida aad u gashay dib u dhaca kirada iyo inaad kareyso bixinta dib u dhaca kirada Caddaynta waa inay ku jirtaa qoraal ka yimi la-taliye dhaqaale kaas oo tilmaamaya dakhligaaga iyo kharashkaaga ama nooc kale oo dhokomantiyo ah (sida warqadaha mushaharkaaga, qorraalada lacag bixinta Centrelink ama caddaynta bixinta kirada). Waxa kale oo aad waydiisan kartaa qof kasta oo taageeri kara kiiskaaga inuu bixiyo caddayn meesha dhageysiga.
Haddii VCAT dib u dhigto Codsiga wuxuu noqon doonaa waqti go’an, caadi ahaan 3-6 bilood. Xaaladdan, ‘dib u dhig’ macnaheedu waa in ka saaridda la hakiyo iyadoo lagu siinaayo fursad labaad. Haddii aad ku bixiso dib u dhaca kirada si waafaqsan Amarka Aamarka VCAT taariikhda la dejiyey VCAT waxay tixgeli doontaa in codsiga laga noqdo iyadoo arrinta la xiri doono.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan raacin Amarka VCAT (tusaale ahaan adigu ayaad u dhigtay inaad lacag bixiso), mulkiilaha waa ‘cusboonaysiin’ karaa codsiga waxaadna heli doontaa Ogeysiinta Dhegeysiga. Haddii ay tani dhacdo, waa inaad tagtaa dhegaysi labaad iyo inaad bixiso sabab wanaagsan ee aan loo raacin amarka, ama waxaa jira fursad aad ku noqon doonto in lagu saaray.
Haddii VCAT diiddo in ay dib u dhigto dhageysiga ayna bixiso Amar Lahaansho, waxaad waydiisan kartaa Xubinta VCAT inuu dib u dhigo soo saaridda Waaranka Lahaanshaha. Tani waxay dib u dhigeysaa wakhtiga booliisku uu fulin karo amarka oo lagaa saaro. VCAT ayaa dib u dhigi kara waaranka ilaa 30 maalmood. Markaad go’aansaneyso inaad dib u dhigto waaranka Xubinta VCAT ayaa tixgelin doona dhibaatadaada iyo dhibta mulkiilaha haddii waaranka dib loo dhigo. Waa inaad hubisaa inaad keento caddaynta dhibaatadaada xagga dhageysiga (sida caddayn inaad codsatay guryo kiro kale, shahaadooyin caafimaad, waraaqo ka yimid shaqaalaha taageerada).
Ogow: haddii mulkiiluha uu qaadanayo talaabo ah in lagu saaro xagga dib u dhaca kirada waxaan kugula talinaynaa inaad sidoo kale akhrido macluumaadka xagga boggayaga ka saaridda haddii mulkiiluhu uu isticmaalo hab kale oo ka dalbado VCAT ee Amarka Lahaansho.
Wixii macluumaad dheeraad ah nala soo xiriir, degaankaaga adeegga TAAP, Kireysiga Plus bixiyaha, ama Xarunta Sharciga Bulshada.
ogeysiis ka biixid
cabashooyinka ku saabsan hantiilayaasha iyo wakiilada guryaha
Xeerka Kireysiga Guryaha 1997 (AustLII webseydka)
Qaybta 246 – Ogeysiin ka saarista ee ku saabsan dib u dhaca kirada
Qaybta 331- codsiga ee haysashaha waxaa laga yaabaa in la tuuro ama dib loo dhigo
Qaybta 352- dib u dhigista waaranka lahaanshaha